Shir lagu qiimaynayo wax-qabadka Mashruuca Damaanad qaadka Cuntada - Cakaara News
Shir lagu qiimaynayo wax-qabadka Mashruuca Damaanad qaadka Cuntada
Jigjiga(CN) November,24, 2015 Waxaa ka furmay xarunta deegaanka ee jigjiga gaar ahaan hoolka shirarka ee kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI shir lagu qiimaynayo waxqabadkii 6 bilood ee ugu danbeeyay ee Maashruuca Shabakada Damanad-qadka Cuntada oo afka qalaad loo yaqaanno“PSNP” kaasi oo hoos yimaada xafiiska horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah ee DDSI.
Shirkan qiimaynta ah oo diirada lagu saarayo waxqabadkii qorshihii mashruuca ee 6 dii bilood ee ugu danbeeyay nidaamka fulineed ee hab-raacyadii lagu hirgaliyay qorshihiisa iyo meelmarinta jihooyinka fulineed ee qorshaha mashruuca iyadoo ay furitaankii shirkan ka soo qaybgaleen masuuliyiinta xafiiska horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah ee DDSI hawl wadeenada shaqaalaha mashruucan oo ka socday 32 degmo ee uu mashruucani ka hawlgalo.
Waxaana furitaankii shirkan ka hadlay Wasiir ku xigeenka xafiiska horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah ee DDSI mudane guuleed aw cali kaahin isaga oo sheegay in sanadihii ugu danbeeyay deegaanka ka hanaq-qaaday isbadallo horumarineed oo wax lagaga badalayo nolosha shacabkeenna, Siyaasadaha waxa ka mid ah horumarinta reer miyiga iyo reer guuraaga oo lagu kobcinayo awoodda wax-soosaar iyo nolosha guud ahaan dadwaynaha deegaanka.
wasiir ku xigeenku mar uu ka waramayay ahmiyada uu leeyahay marshruucani ayaa waxa uu yidhi “ Maashruuca Shabakada Damanadqadka Cuntada oo afka qalaad loo yaqaanno“PSNP” ayaa ka mid ah istiraatijiyadaha siyaasaddan loo adeegsaday. Mashruucan waxa ujeeddadiisa ugu wayni tahay kaalmeynta qaybaha bulshada ee hayntoodu hoosayso ee ku tiirsanaa gargaarka raashimeed, iyada oo ujeeddooyinkiisa gaarka ahina yahay Ka hortagidda hoos u dhaca hantida ee qoysaska damaanada cuntadoodu ay liidato ee ku nool deegaanka Dhiiri-galinta iyo xoojinta suuqa, iyohorumarinta adeegyada iyo ilaalinta khayraadka dabiiciga ee degaanka”
wasiir ku xigeenku mar uu ka hadlayay waxqabadka mashruuca ayaa waxa uu tilmaamay in uu wax wayn ka qabtay Ilaalinta Degaanka; (Terraces, Stone bunds etc) 81,172 KM, ka hortagga carro-guurka iyo xaalufka (gully controls) 59641.9 M3 , qodaalka biyo-qabatinnada 655 goobood, Dhismaha kanalada Waraabka biyaha 509km Goobaha dhirta lagu xanaaneey 57 goobood Taas oo lagu soo saaray dhir ka badan boqolaal kun oo geedWaddooyinka 5274km iyo waliba Dhismaha kaabayaasha dhaqaale ee bulshada. Sidoo kale waxa uu sheegay wasiir ku xigeenku in uu mashruucani siwayn uga qayb qaatay xoojinta dhinaca waxbarashada, caafimaadka dadka iyo kan xoolahaba iyo waliba awood siinta xarumaha tababarada ( FTC)
Isku so wada duub oo Mashruucan oo degaankeenna ka bilawday sanadkii 2008TY, waxaa marki ugu horaysay lagu bilaabay 6 Degmo, iyadoo sanadki dhamaadki 2009TY lagau daray 9 Degmo Hasayeeshee bilawgii sanadki 2011 lagu daray 17 Degmo taas oo tirade guud ka dhigay 32 Degmo.oo degaanka. 28 degmo waxa mashruucan fulintiisa leh Dawladda halka 3 degmona ay ka fuliso hayadda Save The Children International. Tirada guud ee ka faa-iidestayaasha barnaamijkan damaanad qaadka cuntada ayaa soo kordhaysay marba marka kadanbaysay. Tirada ka faaiidaystayaasha mashruucan ee deegaankeenu ayaa hadda gaadhaysa 729,390 qoys. Shirkana qiimaynta ah ee lagu lafa gurayo waxqabadka mashruucan iyo hirgalinta qorshayaashiisa horumarineedna waxa uu socondoonaa mudo 5 maalmood ah